नेकपा केन्द्रीय सदस्यहरुको पार्टी कार्यालयमा धर्ना – rastriyakhabar.com
काठमाडौं । पार्टीभित्र देखिएको विवाद वार्ताको माध्यमबाटै टुंगो लगाउन माग राख्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रीय सदस्यहरुले पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा धर्ना दिएका छन् ।
पार्टीभित्र पछिल्लो समय देखिएको विवादको हल वार्ता र संवादको माध्यमबाट नै निकाल्नुपर्ने माग राख्दै नेताहरु धर्नामा बसेका हुन् । पार्टी विधि, विधान र पद्धतिअनुसार चल्न नसके समस्या आउने भएकाले सबैले विधि पद्धतिअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
केन्द्रीय सदस्य विजय पौडेलले नेताहरुले पार्टीको बैठकबाटै समाधान निकाल्नुपर्ने बताएका छन् । बैठक बाहिरबाट समाधान नहुने उल्लेख गर्दै उनले सामूहिक छलफलबाट नै निष्कर्ष निस्किने बताए । नीतिलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढेमा समस्या समाधान हुने उनको भनाइ छ ।
अर्का केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले पार्टीमा विधि र विधानभन्दा व्यक्ति प्रधान भएर अगाडि बढ्दा यस्तो समस्या आएको बताए । व्यक्तिगत स्वार्थ र स्वेच्छाचारी ढंगले नेताहरु अगाडि नबढेको भए यस्तो सममस्या नआउने उनले बताए । विधि, विधान र पार्टीको बैठकबाट नै अहिलेको समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने उनले बताए ।
अर्का सदस्य जगन्नाथ खतिवडाले पार्टी विभाजन गर्ने तत्वहरु सल्बलाउन लागे उनीहरु एक्लो पर्ने चेतावनी दिए । पार्टी विभाजनको सोच राख्नेहरुले सपना देखेपनि एक्लै हुने जिकिर गर्दै उनले पार्टी पंक्तिलाई कुनै क्षति नपुग्ने बताए । उनले कार्यकर्ताहरुलाई नडराएर पार्टी एकताको पक्षमा वकालत गर्न आग्रह गरे । सबै समस्याको समाधान सम्बाद र विधानको पालना गरेर निस्किने उनको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय नेकपामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्ने पक्ष बलियो हुँदै गएको छ । मदन भण्डारी जन्मजयन्तीका अवसरमा पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले सरकार ढाल्न खोजेको र नेपालका नेताहरु समेत त्यसमा सक्रिय रहेको अभिव्यक्ति दिएपछि पार्टीभित्र विवाद बढेको हो ।
स्थायी समिति बैठकमा ओलीको राजीनामा माग्ने पक्षको आवाज बलियो हुँदै गएपछि ओलीले बैठक छल्दै आएका छन् । सरकारले अचानक संसद बैठक अन्त्य गर्ने निर्णय गरेपछि पार्टी फुटाउने अध्यादेश फेरि आउने आशंका नेकपा नेताहरुले गरिरहेका छन् । दुई अध्यक्षबीचमा छलफलका लागि भन्दै नेकपाको स्थायी समिति बैठक शनिबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।
आज जनै पूर्णिमा, रक्षाबन्धन : यस्तो छ महत्त्व
अदालतप्रतिको जनआस्था कमजोर नपार्न बारको अपिल
१ हजार नेपाली स्वदेश फर्किए, १८ शव ल्याइयो
ओली-प्रचण्डबीच तीन घन्टा छलफल : के के भयो संवादमा ?
निगमले बढायो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, कति बढ्यो ?
जग्गामा महिलाको स्वामित्व बढ्दै
छिमेकीबाट व्यावसायिक फाइदा लिएर मात्र मुलुक समृद्ध बनाउन सकिन्छः पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई
नेकपा विवादले कार्यकर्ता निराश: दुई अध्यक्षले उत्साह जगाउने विश्वास
खुमलटारका ‘विश्वासपात्र’ गौतम यसरी भए बालुवाटार युटर्न !
कारागारमा कैदीबन्दीलाई कोरोना संक्रमण भएपछि ‘सिल
उपत्यका प्रवेश गर्ने २४ जनामा कोरोना संक्रमण
डा.रंगिनाद्वारा ब्लु क्रस हस्पिटलमा ‘डे केयर हिस्टेरेक्टोमि'(दुरबिनको माध्यमबाट पाठेघर निकाल्ने) शल्यक्रिया सम्पन्न
अन्तर जिल्ला सवारी आवागमन पूर्णरुपमा बन्द : कोरोना बढेपछि उपत्यका प्रवेशमा यस्तो व्यवस्था (विज्ञप्तिसहित)